Bit By Bit - Ịjụ ajụjụ - 3.6 Nchọpụta e jikọtara na nnukwu data data
Ịnyocha nyocha na nnukwu data data na-eme ka ị nwee ike ịmepụta atụmatụ nke na-agaghị ekwe omume ma ọ bụrụ na isi data nweta otu.
Imirikiti nchọpụta na-eguzo naanị ya, mgbalị ndị nwere onwe ya. Ha anaghị ewuli ibe ha elu, ha anaghịkwa eji ihe ọmụma ndị ọzọ dị n'ụwa. Nke a ga agbanwe. Enwere ihe dị ukwuu iji nweta site na ijikọ data nchọpụta na nnukwu ihe ọmụma data ndị a tụlere na isi nke abụọ. Site na ijikọta ụdị data abụọ a, ọ na-ekwekarị omume ime ihe ọ bụla na-agaghị ekwe omume ma onye ọ bụla.
E nwere ụzọ dịgasị iche iche a pụrụ isi jikọọ data nyocha na nnukwu data data. N'akụkụ a, m ga-akọwa ụzọ abụọ na-aba uru ma dị iche, m ga-akpọkwa ha ka ha baa ụba na-arịọ ma rịọ rịọ (nọmba 3.12). Ọ bụ ezie na m ga-eji ihe atụ zuru ezu kọwaa nke ọ bụla, ị ga-achọpụta na ndị a bụ ntụziaka n'ozuzu nke enwere ike iji na nyocha data dị iche iche na ụdị nnukwu data. Ọzọkwa, ị ga-achọpụta na enwere ike ịhụ otu n'ime ihe atụ ndị a n'ụzọ abụọ. N'ịtụgharị uche n'echiche ndị dị na isi nke 1, ụfọdụ ndị ga-ele ọmụmụ ihe ndị a anya dị ka ihe atụ nke data nyochaa "nhazi data" na-akwado "njikeremade" data buru ibu, ndị ọzọ ga-elekwa ha anya dịka ihe atụ nke "njikeremade" data nhazi "datamade". Ị ga-ahụ ike abụọ. N'ikpeazụ, ị ga-achọpụta otú ihe atụ ndị a si kọwaa na nyocha na nnukwu ihe ọmụma data zuru ezu ma ọ bụghị n'ọnọdụ.
Figure 3.12: Ụzọ abụọ iji jikọta nnukwu data data na data nyocha. N'ihe bara uru (nkeji nke 3.6.1), nnukwu ihe ọmụma data nwere nnukwu mmasị na data nyochaa na-ewuli ihe dị mkpa gburugburu ya. N'iji rịọ (nkebi nke 3.6.2), nnukwu data data adịghị enwe isi mmasị, mana eji ya iji gbasaa data nyochaa.